Telecentric Lenses - muumbi, fekitari, mutengesi kubva kuChina
(Total 15 Products for Telecentric Lenses)
D25.4mm FL25.4mm N-BK7 plano convex lens
Plano convex lens inoshandiswa muma microscopes uye kukudza magirazi kuti ishandure ese anouya mwenje mwenje kune imwe nongedzo. Iyo lens inoshandiswa se lens system mumakamera sezvavanotarisa mwenje wechiedza wemufananidzo wakajeka.Lens ine zvinangwa zvekurapa futi, sekugadziriswa kweiyo hyperopia Iyo inoshandiswa...
Muenzaniso Nha.: RP-PCCL
Yakasangana neplano-convex cylindrical lens, inogona kushandiswa kuumba iyo elliptical danda re semiconductor laser mune denderedzwa danda. Plano-concave cylindrical lens inogona kushandiswa muzvirongwa zvekufungidzira, masisitimu ekufungidzira, zviridzwa zvemaziso, uye masystem eiyero. Magadzirirwo: Chinyorwa: N-BK7,...
Kaviri convex cylindrical lenses
Muenzaniso Nha.: RP-00FD
Uncoated N-SF11 kaviri concave lenses
Kaviri concave lens ine maviri mukati mukati akakombama nzvimbo. Double Concave lens ine yakashata yakatarisana kureba. Magadzirirwo: Chinyorwa: Optical girazi Dhayamita: 1mm ~ 300mm Focal Legnth Kushivirira: +/- 1% Dhayamita Kushivirira: + 0.0 / -0.1mm Kureba Kushivirira: +/- 0.1mm Pamusoro pemhando: 40/20...
Yakavharwa Plano Convex Lenses
Broadband AR yakaputira achromatic lenses
Achromatic lens inogona kushandiswa sevanyengeri, inotarisa lenzi kana vatambi vechiedza. Izvo zvakagadzirirwa kubvisa chromatic uye idenderedzwa aberrations uye ita mushe kune ese paraxial imaging mabasa. Aya malenzi akafukidzwa nechero dura antireflection yekupfeka kudzikisa kurasikirwa kwepasi munzvimbo dzinoonekwa...
254mm hombe plano convex cylindrical lenses
N-BK7 Isina kufukidzwa Kaviri Convex Cylindrical Lenses
Kaviri concave cylindrical lenses
Realpoo Optics inogona kupa cylindrical Lenses inosanganisira convex cylindrical lens, concave cylindrical lens, meniscus cylindrical lens, uye doublet achromatic cylindrical lens ect. Magadzirirwo: Chinyorwa: N-BK7, N-SF1, Fused Silica, N-SF10 nezvimwewo Dhayamita: 2mm ~ 300mm Focal Legnth Kushivirira: +/- 1%...
Square plano concave cylindrical lenses
Yakasangana neplano-convex cylindrical lens, inogona kushandiswa kuumba iro elliptical danda re semiconductor laser mune denderedzwa danda. Plano-concave cylindrical lens inogona kushandiswa muzvirongwa zvekufungidzira, masisitimu ekufungidzira, zviridzwa zvemaziso, uye masystem eiyero Magadzirirwo: Chinyorwa: N-BK7,...
Square Plano convex cylindrical lenses
Cylindrical lenses anowanzo shandiswa kutarisa inopinda mwenje kune tambo, kana kushandura chimiro chechimiro chemufananidzo. anoshandiswa kune optics, lasers, medical science, zvemagetsi, tele-kutaurirana nevamwe. Realpoo Optics inogona kupa cylindrical Lenses inosanganisira convex cylindrical lens, concave...
Denderedzwa Plano concave cylindrical lenses
Telecentric Lenses Telecentric Lens Telescope Lens Aspheric Lenses Optical Lenses Powell Lenses Fresnel Lenses Electric Fireplace